Maqal: Xaaladu Nolol xumo oo lagasoo sheegayo degmada Buurhakaba ee G/ Baay – SBC
Maqal: Xaaladu Nolol xumo oo lagasoo sheegayo degmada Buurhakaba ee G/ Baay
Xaalad Nolol xumo oo aad u liidata ayaa laga soo sheegayaa degmada Buurhakaba ee gobolkaasi Baay halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowlada Federaalka Soomaaliya.
Wariyaha SBC ugaga soo warama gobolka Baay oo maanta Deegaankaasi Safar shaqo ku tagay ayaa soo sheegaya in xaaladaha nololeed ee dadka ku dhaqan buurhakaba ay tahay mid aad u liidata ayna soo foodsaareen mudooyinkii ugu dambeeyay xaaladan dadka deegaanka ka dib markii ay ka xumaadeen dalagyadii beeraha ay filanayeen sanadkan.
Qaar ka mid ah Dadka deegaanka ayaa sharaxay sababaha xaaladaha nolol xumi ku keenay dadka iyagoo sheegay in ay ka xumaadeen abuurkii beeraha ee sanadkan, wax hay’ado ahna aysan ku sugneyn gobolka taas oo caawisa dadka.
Maamulka Buurhakaba ayaa isna sheegay mar aynu wax ka weydiinay arintan in uu wax kala socdo ayuu sheegay in xaaladahan ay ku yimaadeen ka dib markii mudo ay ka talinayeen degmada Xoogaga xarakada Alshabaab kuwaas oo u diiday in ay wax hay’ado ah ka howlgalaan .
DHageyso Warbixin faah faahsan oo uu wariye Axmed Saadaq C/qaadir Yarow.RIIX AMA DHAGEYSO
Ugu dambeyntii Axmed Maxamed Yuusuf Gudoomiyaha Buurhakaba ayaa ugu baaqay Caalamka intiisa kale iyo Hay’adaha samafalka in ay ka qeyb qaataan gar gaar deg deg ah oo dadka ku dhaqan gobolka la soo gaarsiiyo si ay uga baxaan xaaladan nolol xumi ee soo foodsaartay.,
Axmed C/qaadir Yarow
SBC International Buurhakaba.